Inoraswa asi zvipenyu zvakatemwa | Green Renewables
ari zvigadzirwa zvinoraswa kana kuraswa mune zvakajairika hazvisi zvecology sezvo vachigadzira nyore marara sezvo achishandiswa kamwe chete obva araswa asi zvakare zvinhu zvacho plastics kana zvimwe zvisina biodegradable.
Asi pane nguva dzose kusara kwemutemo, iyo kambani yeItaly Seletti yakagadzira mutsara weanoraswa asi ecological cutlery.
Iyo yekucheka inogadzirwa nematanda saka iwo anoshingirira iwo ari zvachose Biodegradable, bvumira basa rekushongedza uye rinonakidza kune iro bata.
Rudzi urwu rwekuraswa runogona kutsiva plastiki mune zviitiko, zvekudya, mapikniki, chikafu chinoshandiswa mundege kana zvitima, pakati pezvimwe zvinoshandiswa.
Iwo magadzirirwo akanaka ane retro dhizaini inoenda zvakanaka nechero yekupfeka chiitiko.
Kune maforogo, mapanga uye zvipunu zvekushandisa zvinoenderana nezvinodiwa nemidziyo ichapihwa.
Uyu ecological kucheka matanda Inogona kushandiswa uye kuraswa pasina mhosva sezvo huni hunodzikira pasi mumwedzi mishoma.
Izvo zvinoita uye hutsanana hunopihwa ne kuraswa Forogo, Banga Nechipunu izvozvi zvinoenderana nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Izvi zvigadzirwa zvinogona kutengwa mumapeji akasiyana epamhepo saka hazvina basa kuti tinogara kupi.
Zvingave zvakakosha kuti munzvimbo nezviitiko zvinogara zvichishandisa zvigadziriswe zvekucheka, vanofunga nezve mhando yakanaka iyi asiwo zvigadzirwa zvecology uye vorega kushandisa epurasitiki asiri Biodegradable uye hazviwanzo kudzokororwazve.
Unogona kutenga mapakeji ane gumi mauniti ekuchekacheka kana seti yega ye10 spoon, 1 banga uye 1 forogo.
Iyi kambani inoratidza kuti zvinokwanisika kugadzira zvigadzirwa zvine nharaunda kunyangwe zvichiraswa.
Sevatengi isu tinofanirwa kutsigira avo vanopa zvigadzirwa zve organic kuti vawane hupenyu huri nani kune vese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Disposable asi zvipenyu akachekwa
Ini ndinobva kuPeru uye ndiri kufarira izvi zvekucheka sezvo ndine chiitiko, asi hazvisi pachena kwandiri kuti zvakachipa zvakadii kana kuti musiyano wakadii uripo pakati pemitengo pakati pezvinhu izvi zvekucheka zvipuka uye mapurasitiki anoraswa.
Zvakare, une muparidzi here muPeru? kana kuti ndinofanira kutenga sei.
Ini ndinobva kuArgentina uye ndoda kuziva kwandinotora izvi zvipenga zvekucheka. Ndinokutendai zvikuru uye kukwazisa
Ini ndinobvawo kuArgentina uye ndinoda kuziva kana zvazadzikiswa.
Tsamba yangu iri jBellande@gMail.com
Pindura kuna jBllande
Mhoro .. zvinoita here kuvawana muArgentina? kupi? Ndatenda
Mangwanani akanaka, ini ndinobva kuArgentina uye ndoda kutenga matanda ekucheka uye ndinoda kuziva kana iwe uchitakura neDHL kana zvimwe.
Danone inoshandisa bioplastic muma yogurts ayo